आलेख : ‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ? प्रा.डा.राजिव झाको अनुभव - Recent Nepal News
आलेख : ‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ? प्रा.डा.राजिव झाको अनुभव
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २२, २०७६ समय: १४:३८:२१
शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उहाँले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरनुभएको थियो । उहाँको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ । उहाँले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी (चिनियाँ पैसा) अनुदान पाउनुभएको रहेछ । एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हुने सो रकम प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्राडा.झा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।
सन् २०१९ बिदा हुँदै थियो । पश्चिमाहरु नयाँ वर्षको स्वागतको तयारीमा थिए । कोही क्रिस्मस मनाउँदै थिए त कोही लामो विदा लिएर विदेश घुम्ने तयारीमा थिए । डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनबाट खबर आयो निमोनियाको लक्षणसँग मिल्दो जुल्दो खालको नयाँ रोग देखिएको छ । डिसेम्बरको २६ र २७ तिर उहान शहरमा २७ जना यस्ता बिरामी आए । उहानको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना नै दियो । त्यसमा भनिएको थियो– सार्सको लक्षणसँग मिल्दो जुल्दो खालका बिरामी आए, त्यसमध्ये दुई चार जना बाहेक अरु सबै निको भएर घर फर्के । एक हप्ता पछि त्यस्ता बिरामी ४४ पुग्यो । अर्थात् सन् २०२० जनवरीको पहिलो साता अघिल्लो साताको भन्दा झण्डै दोब्बर बिरामी सोही प्रकृतिका देखिए । जनवरीको २० सम्म कुनै नयाँ बिरामी देखिएनन् । त्यसलगत्तै चैतको खरमा आगो लागेजस्तै गरी उहान र त्यसबाहिर पनि यो भाइरस फैलिँदै गयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा समस्या थप जटिल बनेर देखियो भने चीनबाट हामीले पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्छौँ, यसमा कुनै दुविधा नराख्दा हुन्छ ।” नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा इटाली, स्पेन पुगेका चिनियाँ चिकित्सक डाक्टर र अन्य प्राविधिक जनशक्ति पाँच घण्टामा नेपाल आइपुग्ने उहाँको विश्वास छ । “मैले नै अध्यापन गराइरहेको सियान विश्वविद्यालयको टिम नै आवश्यक परेको खण्डमा आउन तयार छ । किनकी छिमेकी हुनुको नाताले पनि चिनियाँहरु नेपाललाई माया मात्रै होइनन् सद्भाव पनि राख्छन्”, डा झाले भन्नुभयो, “गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछिको अवस्थामा म यत्ति दावा गर्नसक्छु ।”